မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
H teide ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်
အရွယ်အစား: 1/2 မှ 3/4 အထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား - ၁.၂ လက်မမှ ၄ လက်မအထိ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အရိုးထဲကိုဝင်ရောက်ရန်အောက်စီဂျင်ဆန့်ကျင်ကော်...
အရွယ်အစား - ၁.၂ လက်မမှ ၄ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အရိုးထဲကို ၀...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အရိုးထဲကို ၀...
အရွယ်အစား - ၁.၂ လက်မမှ ၄ လက်မအထိ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့...
လိပ်ပြာလူမီနီယမ်ကြေးဝါဘောလုံးကိုကိုင်တွယ် အဆို့ရှင်အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့...
အရွယ်အစား - ၁.၂ လက်မမှ ၄ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်အထိဖြစ်သည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: ၁ / ၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110...
Plating နှင့်အတူကြေးဝါ Ball ကိုအဆို့ရှင်
အရွယ်အစား: 1/8 လက်မမှ 1/2 လက်မအထိ ပစ္စည်း - နီကယ်ဖြင့်ကြေးဝါ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အရိုးထဲကို ၀...
1/2 မှ4အထိအရွယ်အစား ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အင်္ဂါရပ်များ: သဲဆေးနှင့်အတူ 1.Forge ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 16 bar ကိုကနေ 25 ဘားမှ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား။ 3. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 4. WOG (water.oil.gas) 5. Stuffing box ကို PTFE ။ ၆၀ ဒီဂရီမှ ၁၁၀ ဒီဂရီအထိအပူချိန်။ 7. ခြယ် လူမီနီယံ handwheel...
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8657 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ??,3/ 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8652 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
မြင့်မားသောဖိအား Gate ကိုအဆို့ရှင် ပြင်ပ SCREW ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင် အဖြူနှင့်အနီရောင်လက်ကိုင်အဆို့ရှင် အနက်ရောင်လက်ကိုင်အဆို့ရှင် လူကြိုက်များသောဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် လူကြိုက်များဘောလုံးအဆို့ရှင် အရည်များအတွက်အဆို့ရှင် အနီရောင်လက်ကိုင်အဆို့ရှင်